Amnesta oo cambaareysay tacadiyada ay carabta qaarkood ku hayaan Banaabaxayaasha – SBC
Amnesta oo cambaareysay tacadiyada ay carabta qaarkood ku hayaan Banaabaxayaasha
Xoog iska caabinta ay Dowladaha Bariga dhexe qaarkood ay ku samaynayaan shacabka isbadal doonka ah ee wadamadooda ayaa Amnest sheegtay in ay keenayso in meesha ay ka baxdo xoriyadii iyo cadaaladii ay dalalkaasi ku faanayeen.
Warbixin sanad la ah oo ay daabacday Amnest ayaa lagu sheegay in ay wadaan Dowladaha Libya,Syria,Bahrain iyo Yemen iska cabin dhinaca shacabka ah,iyadoona ay rasaas u adeegsanayaan kala cayrinta shacabka Banaabaxaya.
Amnest oo soo xiganaysa kooxaha xuquuqda Aadanaha ka shaqeeya ee wadamada ay banaabaxyada isbadal doonka ah ay ka socdaan ayaa sheegtay in ay tahay wax aan loo dul qaadan Karin tacadiyada ay Dowladaha aan kor kusoo xusnay u gaysanayaan shacabka isbadal doonka ah.
Xooghayaha guud ee Amnest International Salil Shetty waxaa uu Amaanay geesinimada dhalinyarada isbadal doonka ah ee ka hor hadlaya Qoryaha ay ku fiiqayaan ciidamada maamulada xukunka sii dharaysanaya iyaga oo aan haysan taageerada shacabkooda.
Salil Shetty waxaa uu sheegay in lagula xisaabtami doona dadka wayeelaynaya shacabka isbadal doonka ah,iyadoona masuul kasta uu dhabarka u ridan doona Masuuliyada dhib kasta oo shacabka soo gaarta.